Abuu Zubeyr oo soo diray cajal cusub “Dhaqaalihii Kenya dhulka ayuu ku dhacay” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Abuu Zubeyr oo soo diray cajal cusub “Dhaqaalihii Kenya dhulka ayuu ku dhacay”
A warsame 15 May 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Hogaamiyaha Alshabaab, Abuu Zubeyr ayaa soo diray cajal cod ah, kaasoo uu uga hadlay dagaalka ay ka wadaan Soomaaliya iyo wadamo ka mid ah Bariga Afrika oo Kenya ka mid tahay.
Abuu Zubeyr wuxuu cajalka oo ku baxaya Af-carabi uga hadlay dagaalka ka socda Soomaaliya, weerarada ka dhaca Kenya, dagaalka u dhaxeeya Muslimiinta iyo Kiristaanka dalka Afrikada Dhexe iyo dagaalka dalka Suuriya ku dhexmaraya jabhado Islaami ah oo Alqaacidda ku wada xirnaa.
Wuxuu Abuu Zubeyr bishaaro u diray hogaamiyaha Ururka Daalibaan ee dalka Afgaanistaan Mulla Maxamed Cumar iyo hogaamiyaha Al-qaacidda Dr. Ayaman Al-dawaahiri, isagoo u sheegay in dalalka Afrika iyo reer galbeedku ku fashilmeen dagaalka ay ka wadaan Soomaaliya ee looga horjeedo Alshabaab.
Abuu Zubeyr ayaa sheegay in ciidamada Midowga Afrika ay guuldareysteen kadib markii ay dagaallo xoog leh kala kulmeen Alshabaab iyo beelaha Ansaarta sida uu hadalka u dhigay.
Cajalka uu soo diray Amiirka Alshabaab, oo ay ku jiraan goosgoosyo fara badan oo ay leeyihiin dad kala duwan ayaa lagu sheegay in taariikhda dagaalka Soomaaliya lagu arkay wax aan horay loo arag oo ah in dadkii deganaa Ceelbuur, Xudur iyo Qoryooley baneeyeen degmooyinkaas oo Alshabaab u raaceen deegaanada ay ku sugan yihiin.
Isagoo la hadlayey Kenya ayuu Abuu Zubeyr yiri “Duulaankii aad kusoo qadeeen Soomaaliya waxaad ka hesheen amaankiina oo xumaaday, dhaqaalihiina oo burburay iyo dhiiga ciidamadiina oo qubanaya kadib maddo aad dalkiina nabad ku heysateen”.
“Haku laabana tilaabo kale oo doqonimo ah oo aad ku dhibaateyneysaan Musliinta Kenya, iyo u yeerashada reer galbeedka iyo Israel, waxba ma idiin qaban karayaan, aayihiinu adinka ayuu idiin yaallaa, xusuusta wixii ka dhacay Westgate” ayuu sidoo kale yiri Abuu Zubeyr.
Markii uu la hadlay Musliinta Kenya, ayuu Amiirka Alshabaab sheegay in Kenya leysay culimo Muslimiin ah, dhibaatooyin bandanna u geystay shacabka Muslimiinta ah, wuxuuna ugu baaqay iney hubka qaataan oo aysan maxkamado iyo dacwooyin ku masquulin.
Abuu Zubeyr wuxuu ka hadlay dhibaatada colaadeed ee Muslimiinta ku heysta dalka Afrikada Dhexe, wuxuuna sheegay in ciidamada Faransiisku hubka ka dhigeen Muslimiinta kadibna kooxo Kisritaan ah xasuuq u geysteen.
Wuxuu hogaamiyaha Alshabaab ugu baaqay Muslimiinta dalka Afrikada Dhexe iney hubka qaataan oo iska dhiciyaan kooxaha hubeysan ee Kisirtaanka ah, isagoo dhanka kale ugu baaqay iney ka fogaadaan hay’daha reer galbeedka oo uu sheegay iney caqiidada ka fashaadinayaan Musliinta.
Abuu Zubeyr ayaa sheegay inuu uga tacsiyeynayo Muslimiinta iyo dagaalyahanada Alqaacidda geeridii ku timid hogaayihii Imaarada Chechnya, Abii Cusmaan Omaro, wuxuuna bogaadiyey hogaamiyaha booskiisa badelay ee lagu magacaabo Abii Muxamed.
Gebagebadii ayuu madaxa ugu sarreeya Alshabaab wuxuu la hadlay Jabhadaha Islaamiga ah ee dagaalla dalka Suuriya ee dhexdooda ka dagaallamaya, wuxuuna sheegay iney ka murugoonayaan waxa halkaas kazoo gaaraya.
“Waxaa na xanuunjiyey waxa dhankiina naga soo gaaraya oo ah dagaalka u dhaxeeya Mujaahidiinta, side ugu raalli noqoteen arrinkaas iyadoo Muslimiinta lagu gumaadayo Suuriya, dalka Boorma iyo Afrikada Dhexe, laguna barakicinayo Qudus, Alle uga baqa dhiiga Mujaahidiinta” ayuu yiri Abuu Zubeyr.
Abuu Zubeyr oo inta badan cajallada uu soo duubo uga hadli jiray Soomaaliya ayaa markaan ka hadlay dalal ka fog Soomaaliya sida Suuriya iyo Afrikada Dhexe.
Madaxweyne Xasan oo u ciirsaday odayaasha kadib markii culeys kasoo wajahay baarlamaanka
15 May oo maanta looga dabaaldegayo Soomaaliya